विगतका असफलताबाट पाठ सिक्ने कहिले ? | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / विगतका असफलताबाट पाठ सिक्ने कहिले ?
विगतका असफलताबाट पाठ सिक्ने कहिले ?
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय February 4, 2014	0 384 Views
राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन । लामो द्वन्द्व र विवादपछि दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचन सम्पन्न भएको अढाई महिनापछि नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रियामा मुलुक आइपुगेको छ । अहिलेको आवश्यकता सहमतीय सरकार भए पनि अब बहुमतकै आधारमा सरकार बनाउने अभ्यास शुरु हुँदैछ । यसबाट राजनीतिक दलहरुले मुलुकको आवश्यकता र जनताको चाहनालाई बुझ्न नसकेको आभाष हुन्छ । संविधान निर्माणमा सहमति खोज्ने हो भने सरकार गठनमा विमति राख्नुको औचित्य के हुनसक्छ ? एउटा दलको बहुमत नभएको स्थितिमा बहुमतीय प्रणालीबाट सरकार बन्छ भनेर ठोकुवा गर्ने आधार अहिलेसम्म देखिन्न । तेस्रो, चौथो, पाँचौं, स्थानमा रहेका दलहरुले प्रतिपक्षमा बस्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेको स्थितिमा कांग्रेस–एमालेको सहमतिबिना बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्न । सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नसक्ने हो भने यसले मुलुकलाई थप राजनीतिक अस्थिरतातर्फ लैजाने पक्का छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच दरिलो सहमति नबन्दासम्म अहिलेकै स्थितिमा बहुमतीय सरकारको सम्भावना पनि न्यून छ । शक्ति बाँडफाँडमा कांग्रेसलाई गलाउने रणनीतिमा एमाले छ भने सत्तालाई आफ्नै केन्द्रबिन्दुमा चलाउने दाउमा कांग्रेस छ । यसले विगतमा देखिएका सत्ता राजनीतिका फोहरी खेलहरु पुनः दोहोरिने सम्भावना छ । सत्ता राजनीतिले प्रधानता पाएपछि राजनीतिक मूल्य मान्यताहरु अलपत्र पर्छन् । त्यो बेला संविधान निर्माणको प्रमुख कार्यभार स्वतः कमजोर बन्नेछ । विगतमा सत्रपटकसम्म प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्नुपरेको कटु यथार्थ हाम्रासामु छ । दलहरुले विगतकै चरित्र र क्रियाकलाप दोहो¥याउँदै जाने हो भने इतिहासको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न ।
बचन र कर्ममा एकरुपता नपाइनु नेपाली समाजको विशेषताजस्तै बन्न पुगेको छ । चाहे नागरिक तहमा होस् वा राजनीतिक वृत्तमा सर्वत्र अन्योल र द्विविधा देख्न पाइन्छ । हरेक चिजलाई आफ्नो स्वार्थ र चाहनाअनुरुप व्याख्या विश्लेषण गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन । निरंकुश राजतन्त्रको एकाधिकारवादी शासन प्रणालीको पीडा भोगेको नेपाली समाजमा गणतन्त्रात्मक समावेशी सोचको विकास हुन नदिने शक्ति अहिले पनि जब्बर छ । नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण र विकास हुन नसक्दा अग्रगामी एजेण्डाहरु बेवारिसे बन्ने खतरा प्रवल देखिन्छ ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा विगतका त्रुटिहरु सच्याएर अगाडि बढ्ने सवालमा समेत राजनीतिक दल र नेतृत्ववर्ग इमानदार बनेको पाइएन । सहमतिको बाटो छोडेर बहुमत र अल्पमतको खेल शुरु भएकाले सरकार गठन एवं विघटनमै दलहरु अल्झने आशंका प्रवल बन्दै गएको छ । संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई निकास दिनु नै अहिलेको अहं सवाल हो तर सत्तास्वार्थका कारण संविधान निर्माणले प्राथमिकता नपाउने अवस्थातिर मुलुक जाँदैछ । संविधानसभाको नयाँ जनादेशअनुरुप नयाँ सरकार गठन गर्न आवश्यक छ तर त्यसले संविधान निर्माणको एजेण्डालाई पूर्णता दिने सवाललाई केन्द्रमा राख्न त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । हाम्रो सरकार बनेपछि सबै हुन्छ भन्नेखालको गलत चिन्तन कसैले राख्नु हुँदैन । सबै दल एकतावद्ध भएर सहमति निर्माण भयो भने मुलुकले निकास पाउँछ भन्ने दृष्टिकोण नै अहिलेको यथार्थ हो । कम्तिमा दलहरुले विगतका त्रुटिहरुको समीक्षा गर्दै त्यसबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने सामूहिक प्रतिवद्धता देखाउन सक्नुपर्छ ।
Previous: संविधानका लागि सहमति
Next: विभिन्न विद्यालयहरुको वार्षिकोत्सव